isivumelwano Free zorhwebo ne-South Korea esusa nomqobo
Iimpahla kunye neenkonzo zorhwebo phakathi China kunye noMzantsi Korea umiselwe bezibaxa emva kokuba isivumelwano sorhwebo free-ekulindeleke kakhulu phakathi kwamazwe amabini ewela ukhubeka yowiso kakhulu ngoMvulo. I-National Assembly of South Korea wanika kokukhanya okuluhlaza ukuya isivumelwano yorhwebo obuhle B ...
Ukutyhala ubuchwepheshe kwimveliso iikhemikhali oyile, kunye nokujonga phambili ngenqwelomoya aerospace Louisiana ufuna parlay amandla ayo oli negesi yendalo kunye nemveliso lwemichiza ibe eyandisiweyo ubuhlobo zorhwebo kunye neTshayina, njengoko igosa kuphuhliso lwezoqoqosho top karhulumente. Don Pierson kwaba ...
Price of PTFE liphuma abavumisi!
Ngokutsho imeko yezoqoqosho ngamazwe, ixabiso PTFE avuke yi-30%, kwaye kwangaphambili nge-60% ngo-2017.We lubonisa zonke abathengi amalungiselelo umyalelo annsual ka-2017 ngokukhawuleza kangangoko possible.It Ndakuzuza kuthi ukuba senze amalungiselelo emveliso, stock Akuse amaxabiso ka-2016.
Global Tank Container ngo-2017
Itanki container fleet jikelele iqulathe uluhlu lweentlobo itanki kuquka neetanki ulwelo, igesi yepetroliyam, Ithatyathwe emigutyeni yonke, utshintsho amatanki kunye specials. Amatanki ngezantsi 20ft ubude ezifana nezo lifana kushishino yeoli offshore azifakwanga kweli Survey. Isikhongozeli itanki kakhulu ilawulwa kwaye ...
Ngokutsho s zoqoqosho ngamazwe ...